WePlay! Bukovel Minor ပှဲကို ရောကျနခေဲ့တဲ့ Dendi နဲ့ အငျတာဗြူး” – Gaming Noodle
WePlay! Bukovel Minor ပှဲကို ရောကျနခေဲ့တဲ့ Dendi နဲ့ အငျတာဗြူး
2020 ရဲ့ ပထမဆုံး Minor ဖွဈတဲ့ WePlay Bukovel Dota2 Tournament ကတော့ အောငျမွငျစှာ ပွီးစီးသှားခဲ့ပါပွီ။ ကြှနျတျောတို့ Gaming Noodle ရဲ့ Preview ထဲကအတိုငျး “Nigma ကို ဘယျသူတားဆီးနိုငျမှာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခှနျးအတှကျ အဖွကေို ရှာမတှခေဲ့ကွပါဘူး။ “Upper bracket is for bi***es” ဆိုတဲ့ Miracle ရဲ့ စကားအတိုငျး Lower Bracket ကနတေကျပွီး RNG ကို 3-1 နဲ့ အနိုငျရကာ ဗိုလျစှဲနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ယူကရိနျးနိုငျငံအတှငျးမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ WePlay! Bukovel Minor ဟာ Dendi နထေိုငျတဲ့ မွို့နဲ့အလှနျနီးပွီး မျောတျောကားနဲ့ သှားရငျ ၃ နာရီခနျ့သာ ကွာမွငျ့ပါတယျ။ DPC season အတှကျလညျး အကွုံးဝငျတဲ့ ဒီပှဲမှာ Dendi ဟာ ရုရှားဘာသာ analyst တဈဦးအနနေဲ့ သှားရောကျအားဖွညျ့ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ပွိုငျပှဲမတိုငျမီမှာ Dendi ကို VPEsports က တှဆေုံ့ပွီး အငျတာဗြူးပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ အငျတာဗြူးထဲမှာတော့ သူ့ရဲ့ ရှဆေ့ကျပွုလုပျသှားမယျ့အစီအစဉျမြား၊ Na’Vi က ထှကျခှာလာခဲ့ပွီးနောကျ အတှအေ့ကွုံမြား၊ ၈ နှဈ ကစားခဲ့တဲ့ အသငျးကနေ ထှကျခှာလာခဲ့ခြိနျ ခံစားခကျြ၊ ယခု WePlay! Bukovel Minor ပှဲနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ထငျမွငျခကျြမြား စသဖွငျ့ မေးမွနျးထားခဲ့ပါတယျ။
Question: မင်ျဂလာပါ Dendi ရေ။ ကြှနျတျောတို့နောကျဆုံးတဈခေါကျ အငျတာဗြူးခဲ့တုနျးက Na’Vi ကနေ မထှကျရသေးဘူးနျော။ ဒီတော့ ပထမဆုံးမေးခှနျးအနနေဲ့ Na’Vi က ထှကျပွီး အခုလို free agent တဈယောကျဖွဈလာတဲ့အတှကျ ဘဝမှာ ဘယျလိုအပွောငျးအလဲတှေ ကွုံတှခေဲ့ရလဲ ဆိုတာ သိခငျြပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ အလုပျနဲ့ ပတျသကျလို့ရော စိတျပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲလား ဒါမှမဟုတျ အလုပျတှေ ပိုမြားလာလား။ ဘယျလို ခွလှေမျးတှေ ထပျလှမျးဦးမယျဆိုတာ ဖွကွေားပေးပါဦး။
Answer: ဟုတျကဲ့။ ထှကျလိုကျပွီး တဈနှဈလောကျတော့ ကြှနျတျော လှတျလပျသှားခဲ့တယျဗြ။ စိတျပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုလညျး အခြိနျပိုပေးနိုငျခဲ့တယျ။ နောကျပိုငျးကတြော့ ကြှနျတျော Tigers အသငျးမှာ ကစားတယျ။ ဘဝမှာ အရမျးပွောငျးလဲသှားတာမြိုးတော့ မရှိပါဘူး။ အခြိနျရသမြှ လကေ့ငျြ့တယျ။ အရငျတုနျးကလိုပဲ အမွဲလကေ့ငျြ့ဖွဈနတောဆိုတော့ ဘာမှ မပွောငျးဘူးလို့တောငျ ပွောလို့ ရပါတယျ။
ကိုယျပိုငျရညျမှနျးခကျြလညျး အခုထိ ရှိပါသေးတယျ။ တတျစှမျးသမြှလညျး ကွိုးစားနပေါတယျ။ Na’Vi မှာ ကစားတုနျးကဆိုရငျ အပွငျကပေးတဲ့ ဖိအားတှလေညျး မြားတယျ။ ဒီတော့ ခွုံငုံပွောရရငျ ထှကျလာတုနျးခဏတော့ လှတျလပျသှားတာပေါ့ဗြာ။
Question: Na’Vi က ထှကျလာပွီးတော့ အရှတေ့ောငျအာရှဘကျ ရောကျသှားခဲ့တာကို ပရိသတျအမြားစုက အံ့သွနကွေတယျဗြ။ Dendi အနနေဲ့ ဘာဖွဈလို့ Tigers အသငျးကို ဝငျခဲ့တာဖွဈမလဲ။
Answer: Na’Vi က ထှကျလာတော့ ပထမဆုံး ကြှနျတျော ဝငျမယျ့အသငျးအပျေါမှာ အမြားကွီး မြှျောလငျ့ထားခဲ့မိတယျ။ အဲဒါကွောငျ့လညျး အငျအားကွီးဖို့ အလားအလာရှိမယျ့ အသငျးကို ရှာခဲ့တယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ခတျေနောကျပွနျဆှဲသလို ခံစားရမှာစိုးလို့ CIS အသငျးတှဆေီမှာလညျး မကစားခငျြဘူး။ ကြှနျတေျာ့ကိုချေါခငျြတဲ့ အသငျးတျောတျောမြားမြားရဲ့ ရညျရှယျခကျြတှကေို သခြော မသိတာလညျး ပါတယျ။
တခြို့က ကြှနျတေျာ့နာမညျနဲ့ ပုံရိပျကို အသုံးခခြငျြလို့ သကျသကျချေါတာမြိုးတှလေညျး ရှိမယျ။ ဒီတော့ တခွားရှေးလို့ ရမယျ့ဟာ ရှာခဲ့တယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ Theeban (1437) က ကြှနျတေျာ့ကို Tigers ဆီ လာဖို့ ကမျးလှမျးတယျ။ သူပွောတဲ့ထဲမှာ ကြှနျတျောနဲ့ အတူအသငျးထဲမှာ ပါလာမယျ့ Mushi က အရငျထဲက ကြှနျတျောလေးစားရတဲ့ ကစားသမားဖွဈသလို MoonMeander ကလညျး ထိပျတနျးကစားသမား ဖွဈနတေယျ။ Xepher ကိုတော့ အရငျက မသိသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အကုနျပေါငျးလိုကျတော့ အတျောလေးအဆငျပွတေဲ့ လူစာရငျးမို့ ကြှနျတျောလညျး အဲဒီအသငျးထဲ ဝငျဖွဈသှားခဲ့တယျ။
Tigers မှာ ကစားခဲ့တာက အတှအေ့ကွုံကောငျးတဈခုပါပဲ။ ကြှနျတျောက ဂိမျးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ ဗဟုသုတ မြားမြားလိုခငျြသလို ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈလာဖို့ လိုအပျတဲ့အရာတှကေိုလညျး သိခငျြတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ ဘယျလိုပဲ ဖွဈသှားပါစေ၊ Tigers က ကြှနျတျောလိုအပျတဲ့ အတှအေ့ကွုံကောငျးတှေ အမြားကွီး ပေးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီတုနျးက ပြျောလညျး ပြျောတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ကှာလာလမျပူမွို့ကို အတူတူသှားတယျ။ အစားအသောကျတှေ ကောငျးသလို Dota လညျး ကောငျးကောငျး ကစားခဲ့ကွပါတယျ။ ပထမဆုံးအကွိမျ လှတျလှတျလပျလပျဖွဈနခေဲ့တာမို့လားတော့ မသိဘူး။ အရမျးပြျောခဲ့ပါတယျ။
Question: ဟုတျကဲ့ပါ။ လကျရှိအခြိနျမှာ ကိုယျပိုငျအသငျးထောငျဖို့ အပွငျးအထနျ ကွိုးပမျးနတောကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့တဈခေါကျတုနျးက အသငျးလူစာရငျးအကွောငျး တငျခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုထဲမှာ ပါတဲ့ ကစားသမား ၂ ယောကျက အခုအခြိနျ Dendi ဆီမှာ မရှိပဲ တခွားအသငျးကို ရောကျနတေယျနျော။ အဲဒါနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ရော ဘာပွောခငျြလဲ။ ကိုယျပိုငျအသငျးအဖှဲ့အစညျးရော ထောငျဖွဈဦးမှာလား။
Answer: ဒီလိုကိစ်စတှကေတော့ အသငျးတိုငျးမှာ ရှိတဲ့ ပွဿနာတှပေါပဲ။ လူမှုရေးပွဿနာတှေ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ပွဿနာတှေ မြိုးစုံ ရှိမယျ။ အငျအားကွီးအသငျးပဲ ဖွဈဖွဈ အသငျးငယျလေးပဲ ဖွဈဖွဈ ပွဿနာတှေ ကွုံရမယျ။ ဒါတှကေို ရငျဆိုငျ ဖွရှေငျးကွရမှာပါပဲ။ လူငယျအသငျးတှဆေိုရငျတော့ ကွုံရမယျ့ ပွဿနာတှကေ ပိုရှုပျထှေးပါတယျ။
ဥပမာ လှနျခဲ့တဲ့ တဈလလောကျက အသငျးသဈတဈခု ဖှဲ့လိုကျပွီ ဆိုပါစို့။ ၂ ပတျ ၃ ပတျလောကျကွာလို့ ခကျခဲတဲ့အခြိနျတှရေောကျလာရငျ ခေါငျးဆောငျ ဒါမှမဟုတျ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ ကစားသမားတှကေ ပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့ ကွိုးစားမယျ။ ငယျရှယျတဲ့သူတှကေတြော့ အလှယျတကူပဲ တခွားအဆငျပွတေဲ့နရောကို ခုနျကူးသှားရော။ ဘာမှလညျး ပွနျမကွညျ့ စဉျးလညျး မစဉျးစားကွဘူး။
လူငယျကစားသမားတှနေဲ့ ပတျသကျရငျ ဒါတှေ ခဏခဏဖွဈပါတယျ။ အခုတော့ မွငျနကြေ ဖွဈသှားပါပွီ။ CIS မှာဆို ခဏခဏဖွဈတယျ။ ကစားသမားတှကေလညျး အသငျးပေါငျးစုံမှာ ရောနတောပါပဲ။ ငယျရှယျတဲ့သူတှကေ ခကျခဲ့တဲ့ ပွဿနာတှကေို ရငျဆိုငျဖွရှေငျးတာမြိုး မလုပျခငျြကွဘူး။ တကယျတမျးကတြော့ ပွဿနာကို ရငျဆိုငျပွီး ရုနျးကနျဖွရှေငျးမှ ပိုသနျမာလာမှာပါ။
ကြှနျတေျာ့ ကိုယျပိုငျအသငျးအဖှဲ့အစညျး ထောငျဖွဈမှာပါ။ ဒီအတှကျလညျး စိတျလှုပျရှားနပေါတယျ။
Question: Bukovel Minor နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ရော ဘာပွောခငျြလဲ။ ဒီပှဲက WePlay! ရဲ့ ပထမဆုံး DPC tournament ဖွဈသလို သူတို့နဲ့ ပူးပေါငျးပွီး အလုပျလုပျတာကလညျး Dendi အတှကျ ပထမဆုံးအကွိမျနျော။ ဟုတျလား မသိဘူး။
Answer: ဟုတျပါတယျ။ ကြှနျတျော သူတို့ရဲ့ အှနျလိုငျးစတူဒီယို ဆငျထားတဲ့ပုံတှကေို အရငျနှဈထဲက မွငျဖူးပါတယျ။ CS: GO ရဲ့ Forget of Masters LAN ပှဲပါ။ သူတို့ရဲ့ အပွငျအဆငျတှကေိုလညျး သဘောကတြယျ။ သူတို့ရဲ့ ဖနျတီးမှုတှကေလညျး ကောငျးမှနျပွီး ထူးခွားတယျလို့လဲ ကြှနျတျောမွငျတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး Dota2Minor အတှကျ သူတို့နဲ့ အလုပျတှဲလုပျရတာကိုလညျး ကြှနျတျောပြျောပါတယျ။ Bukovel ရဲ့ ဆောငျးရာသီပုံပွငျလေးတဈပုဒျထဲမှာ ပါဝငျနရေသလိုလညျး ခံစားမိတယျ။ ဒီကနေ ကြှနျတေျာ့နတေဲ့ Lviv မွို့ကို ကားနဲ့သှားရငျလညျး ၃ နာရီလောကျပဲ ကွာမှာပါ။
Question: ကြှနျတျောထငျတာတော့ ဒီ Minor ပှဲကို လာတဲ့သူအားလုံးက Lviv လဆေိပျကနတေဈဆငျ့ Bukovel ကို လာရတာဆိုတော့ အကုနျလုံး Dendi မွို့ကို ရောကျဖူးသှားပွီလို့ပွောရမှာပေါ့နျော။
Answer: (ရယျလကျြ) ဟုတျပါ့ဗြာ။ အမှနျပါပဲ။ လူတိုငျးကတော့ Lviv ကနေ လာရတာဗြ။ ဒါပမေယျ့ မွို့ကို လှညျ့ပတျကွညျ့ရှုဖို့ကတြော့ အခြိနျမရကွပါဘူးဗြာ။ ကြှနျတေျာ့မွို့က အရမျးလှပါတယျ။
Question: Esports လောကထဲက လူတျောတျောအမြားမြားအတှကျ နရောတဈခုရောကျရငျ ကွိုကျသလို လညျပတျနိုငျဖို့ ဘယျတော့မှ အခြိနျမလုံလောကျဖွဈကွရတယျဗြာ။ Dendi ဆိုလညျး နရောတှအေမြားကွီး ရောကျဖူးပွီး လညျပတျဖို့ကတြော့ အခြိနျမရဖွဈနခေဲ့မှာပေါ့နျော။
Answer: ဟုတျပါတယျ။ တကယျမှနျကနျတဲ့အခကျြပါ။
Question: Minor ပှဲ မတိုငျမီ တဈရကျက nerf တှခေညျြးပဲ ပါတဲ့ 7.23f ကို Valve က ထုတျခဲ့တယျနျော။ အဲဒီထဲမှာ meta ထဲက တဈခြို့အရေးကွီး hero တှကေိုမှ IceFrog က ရှေး nerf လိုကျတာ တှရေ့တယျ။ Doom, Puck နဲ့ Viper တို့ကို nerf လိုကျတာက Bukovel Minor ပှဲအပျေါ ကွီးမားတဲ့ သကျရောကျမှုတှေ ရှိလာမယျလို့ မွငျလား။
Answer: အသအေခြာပါပဲ။ ဒီ nerf တှဟော ပွိုငျပှဲဝငျအသငျးတှအေတှကျ ကွီးမားတဲ့ သကျရောကျမှုတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ လောလောဆယျ Doom နဲ့ Puck ဟာ pick rate အမွငျ့ဆုံး hero တှထေဲမှာ ပါတယျ။ ရနျသူအသငျးရဲ့ draft ထဲမှာ Doom ပါလာဖို့ မြားသလို Doom လာရငျလညျး သူ့ကို မနိုငျတဲ့ hero တှေ pick လို့ မဖွဈဘူး။ ဒီတော့ အတျောမြားမြားက ရနျသူ Doom လာရငျ counter လို့ ရမယျ့ hero တှေ ရှေးပွီး လကေ့ငျြ့ထားကွမယျ။
နညျးဗြူဟာ ကွိုစဉျးစားထားကွတဲ့အထဲမှာလညျး အဲဒီ counter hero တှေ ပါနမှောပဲ။ Puck လညျး အတူတူပါပဲ။ ဒီတော့ Doom တို့ Puck တို့ကို nerf လိုကျရငျ draft တှပေါ အကုနျပွောငျးကုနျမယျ။ ကွိုမစဉျးစားထားသလို ကွိုလညျး မလကေ့ငျြ့ထားတဲ့ hero တှေ pick ပွီး ကစားတဲ့ အသငျးတှေ ရှိလာမယျ။ Patch တဈခုမှာ ပါလာတဲ့ အသေးစား nerf လေး ၅ ခုက meta တဈခုလုံးကို ကွီးကွီးမားမား ပွောငျးလဲပဈလိုကျနိုငျပါတယျ။
တဈခြို့အသငျးတှကေ လိုကျလြောညီထှဖွေဈအောငျ ကွိုးစားကွမယျ။ တဈခြို့ဆိုလညျး patch ပွောငျးပွီး ခဏလေးအတှငျးမှာတငျ အသဈစဉျးစားမိတာတှေ ရှိလာမယျ။ တဈခြို့ကတော့ အရငျလကေ့ငျြ့ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုငျးပဲ အကောငျးဆုံးကစားနိုငျအောငျ ကွိုးစားမယျ။ ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈပါ၊ ပှဲရဲ့ အစပိုငျးရကျတှမှောတော့ အသငျးတှရေဲ့ ကပြနျးကစားကှကျတှနေဲ့ ပရမျးပတာဖွဈနတောတှေ မွငျကွရမှာပါပဲ။ ပွိုငျပှဲအတှအေ့ကွုံပိုရှိထားတဲ့အသငျးတှကေ အသာစီးရနမေယျ။ အတှအေ့ကွုံသိပျမရှိပဲ ကွိုးစားမှုကိုပဲ အခွခေံထားတဲ့ အသငျးတှအေတှကျကတော့ ဒီ patch အသဈထှကျလာတာ ကံဆိုးတာပါပဲ။ သူတို့ဆို ရကျပေါငျးမြားစှာ မနားမနေ စခနျးသှငျးလကေ့ငျြ့မှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ကွရမှာပါ။
Question: ဟုတျကဲ့ပါ။ အခုလို ဖွကွေားပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ နောကျတဈကွိမျလညျး ထပျဆုံခငျြပါသေးတယျ။ ပရိသတျကိုရော ဘာမြား ပွောခငျြသေးလဲ မသိဘူး။
Answer: ဟုတျကဲ့။ ကြှနျတျောကလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ကို အားပေးပွီး စောငျ့ကွညျ့နကွေတဲ့ ပရိသတျအားလုံးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။
Photos: WePlay! Esports
WePlay! Bukovel Minor ပွဲကို ရောက်နေခဲ့တဲ့ Dendi နဲ့ အင်တာဗျူး
2020 ရဲ့ ပထမဆုံး Minor ဖြစ်တဲ့ WePlay Bukovel Dota2 Tournament ကတော့ အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ Gaming Noodle ရဲ့ Preview ထဲကအတိုင်း “Nigma ကို ဘယ်သူတားဆီးနိုင်မှာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေကို ရှာမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။ “Upper bracket is for bi***es” ဆိုတဲ့ Miracle ရဲ့ စကားအတိုင်း Lower Bracket ကနေတက်ပြီး RNG ကို 3-1 နဲ့ အနိုင်ရကာ ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ WePlay! Bukovel Minor ဟာ Dendi နေထိုင်တဲ့ မြို့နဲ့အလွန်နီးပြီး မော်တော်ကားနဲ့ သွားရင် ၃ နာရီခန့်သာ ကြာမြင့်ပါတယ်။ DPC season အတွက်လည်း အကြုံးဝင်တဲ့ ဒီပွဲမှာ Dendi ဟာ ရုရှားဘာသာ analyst တစ်ဦးအနေနဲ့ သွားရောက်အားဖြည့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီမှာ Dendi ကို VPEsports က တွေ့ဆုံပြီး အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်တာဗျူးထဲမှာတော့ သူ့ရဲ့ ရှေ့ဆက်ပြုလုပ်သွားမယ့်အစီအစဉ်များ၊ Na’Vi က ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးနောက် အတွေ့အကြုံများ၊ ၈ နှစ် ကစားခဲ့တဲ့ အသင်းကနေ ထွက်ခွာလာခဲ့ချိန် ခံစားချက်၊ ယခု WePlay! Bukovel Minor ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထင်မြင်ချက်များ စသဖြင့် မေးမြန်းထားခဲ့ပါတယ်။
Question: မင်္ဂလာပါ Dendi ရေ။ ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် အင်တာဗျူးခဲ့တုန်းက Na’Vi ကနေ မထွက်ရသေးဘူးနော်။ ဒီတော့ ပထမဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ Na’Vi က ထွက်ပြီး အခုလို free agent တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဘဝမှာ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ရော စိတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲလား ဒါမှမဟုတ် အလုပ်တွေ ပိုများလာလား။ ဘယ်လို ခြေလှမ်းတွေ ထပ်လှမ်းဦးမယ်ဆိုတာ ဖြေကြားပေးပါဦး။
Answer: ဟုတ်ကဲ့။ ထွက်လိုက်ပြီး တစ်နှစ်လောက်တော့ ကျွန်တော် လွတ်လပ်သွားခဲ့တယ်ဗျ။ စိတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အချိန်ပိုပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ကျွန်တော် Tigers အသင်းမှာ ကစားတယ်။ ဘဝမှာ အရမ်းပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ အချိန်ရသမျှ လေ့ကျင့်တယ်။ အရင်တုန်းကလိုပဲ အမြဲလေ့ကျင့်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဘာမှ မပြောင်းဘူးလို့တောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်လည်း အခုထိ ရှိပါသေးတယ်။ တတ်စွမ်းသမျှလည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ Na’Vi မှာ ကစားတုန်းကဆိုရင် အပြင်ကပေးတဲ့ ဖိအားတွေလည်း များတယ်။ ဒီတော့ ခြုံငုံပြောရရင် ထွက်လာတုန်းခဏတော့ လွတ်လပ်သွားတာပေါ့ဗျာ။
Question: Na’Vi က ထွက်လာပြီးတော့ အရှေ့တောင်အာရှဘက် ရောက်သွားခဲ့တာကို ပရိသတ်အများစုက အံ့သြနေကြတယ်ဗျ။ Dendi အနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ Tigers အသင်းကို ဝင်ခဲ့တာဖြစ်မလဲ။
Answer: Na’Vi က ထွက်လာတော့ ပထမဆုံး ကျွန်တော် ဝင်မယ့်အသင်းအပေါ်မှာ အများကြီး မျှော်လင့်ထားခဲ့မိတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း အင်အားကြီးဖို့ အလားအလာရှိမယ့် အသင်းကို ရှာခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသလို ခံစားရမှာစိုးလို့ CIS အသင်းတွေဆီမှာလည်း မကစားချင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ချင်တဲ့ အသင်းတော်တော်များများရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို သေချာ မသိတာလည်း ပါတယ်။
တချို့က ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ ပုံရိပ်ကို အသုံးချချင်လို့ သက်သက်ခေါ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိမယ်။ ဒီတော့ တခြားရွေးလို့ ရမယ့်ဟာ ရှာခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ Theeban (1437) က ကျွန်တော့်ကို Tigers ဆီ လာဖို့ ကမ်းလှမ်းတယ်။ သူပြောတဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူအသင်းထဲမှာ ပါလာမယ့် Mushi က အရင်ထဲက ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ ကစားသမားဖြစ်သလို MoonMeander ကလည်း ထိပ်တန်းကစားသမား ဖြစ်နေတယ်။ Xepher ကိုတော့ အရင်က မသိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကုန်ပေါင်းလိုက်တော့ အတော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ လူစာရင်းမို့ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအသင်းထဲ ဝင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
Tigers မှာ ကစားခဲ့တာက အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်က ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဗဟုသုတ များများလိုချင်သလို ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်း သိချင်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်သွားပါစေ၊ Tigers က ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ အများကြီး ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ပျော်လည်း ပျော်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကွာလာလမ်ပူမြို့ကို အတူတူသွားတယ်။ အစားအသောက်တွေ ကောင်းသလို Dota လည်း ကောင်းကောင်း ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်နေခဲ့တာမို့လားတော့ မသိဘူး။ အရမ်းပျော်ခဲ့ပါတယ်။
Question: ဟုတ်ကဲ့ပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်အသင်းထောင်ဖို့ အပြင်းအထန် ကြိုးပမ်းနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းက အသင်းလူစာရင်းအကြောင်း တင်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုထဲမှာ ပါတဲ့ ကစားသမား ၂ ယောက်က အခုအချိန် Dendi ဆီမှာ မရှိပဲ တခြားအသင်းကို ရောက်နေတယ်နော်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဘာပြောချင်လဲ။ ကိုယ်ပိုင်အသင်းအဖွဲ့အစည်းရော ထောင်ဖြစ်ဦးမှာလား။
Answer: ဒီလိုကိစ္စတွေကတော့ အသင်းတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ပြဿနာတွေပါပဲ။ လူမှုရေးပြဿနာတွေ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပြဿနာတွေ မျိုးစုံ ရှိမယ်။ အင်အားကြီးအသင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသင်းငယ်လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာတွေ ကြုံရမယ်။ ဒါတွေကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းကြရမှာပါပဲ။ လူငယ်အသင်းတွေဆိုရင်တော့ ကြုံရမယ့် ပြဿနာတွေက ပိုရှုပ်ထွေးပါတယ်။
ဥပမာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က အသင်းသစ်တစ်ခု ဖွဲ့လိုက်ပြီ ဆိုပါစို့။ ၂ ပတ် ၃ ပတ်လောက်ကြာလို့ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရောက်လာရင် ခေါင်းဆောင် ဒါမှမဟုတ် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကစားသမားတွေက ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားမယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကျတော့ အလွယ်တကူပဲ တခြားအဆင်ပြေတဲ့နေရာကို ခုန်ကူးသွားရော။ ဘာမှလည်း ပြန်မကြည့် စဉ်းလည်း မစဉ်းစားကြဘူး။
လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒါတွေ ခဏခဏဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ မြင်နေကျ ဖြစ်သွားပါပြီ။ CIS မှာဆို ခဏခဏဖြစ်တယ်။ ကစားသမားတွေကလည်း အသင်းပေါင်းစုံမှာ ရောနေတာပါပဲ။ ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေက ခက်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတာမျိုး မလုပ်ချင်ကြဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ပြီး ရုန်းကန်ဖြေရှင်းမှ ပိုသန်မာလာမှာပါ။
ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်အသင်းအဖွဲ့အစည်း ထောင်ဖြစ်မှာပါ။ ဒီအတွက်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။
Question: Bukovel Minor နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဘာပြောချင်လဲ။ ဒီပွဲက WePlay! ရဲ့ ပထမဆုံး DPC tournament ဖြစ်သလို သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အလုပ်လုပ်တာကလည်း Dendi အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်နော်။ ဟုတ်လား မသိဘူး။
Answer: ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူတို့ရဲ့ အွန်လိုင်းစတူဒီယို ဆင်ထားတဲ့ပုံတွေကို အရင်နှစ်ထဲက မြင်ဖူးပါတယ်။ CS: GO ရဲ့ Forget of Masters LAN ပွဲပါ။ သူတို့ရဲ့ အပြင်အဆင်တွေကိုလည်း သဘောကျတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကလည်း ကောင်းမွန်ပြီး ထူးခြားတယ်လို့လဲ ကျွန်တော်မြင်တယ်။
ဒါကြောင့်လည်း Dota2Minor အတွက် သူတို့နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရတာကိုလည်း ကျွန်တော်ပျော်ပါတယ်။ Bukovel ရဲ့ ဆောင်းရာသီပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ထဲမှာ ပါဝင်နေရသလိုလည်း ခံစားမိတယ်။ ဒီကနေ ကျွန်တော့်နေတဲ့ Lviv မြို့ကို ကားနဲ့သွားရင်လည်း ၃ နာရီလောက်ပဲ ကြာမှာပါ။
Question: ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ဒီ Minor ပွဲကို လာတဲ့သူအားလုံးက Lviv လေဆိပ်ကနေတစ်ဆင့် Bukovel ကို လာရတာဆိုတော့ အကုန်လုံး Dendi မြို့ကို ရောက်ဖူးသွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။
Answer: (ရယ်လျက်) ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ အမှန်ပါပဲ။ လူတိုင်းကတော့ Lviv ကနေ လာရတာဗျ။ ဒါပေမယ့် မြို့ကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုဖို့ကျတော့ အချိန်မရကြပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော့်မြို့က အရမ်းလှပါတယ်။
Question: Esports လောကထဲက လူတော်တော်အများများအတွက် နေရာတစ်ခုရောက်ရင် ကြိုက်သလို လည်ပတ်နိုင်ဖို့ ဘယ်တော့မှ အချိန်မလုံလောက်ဖြစ်ကြရတယ်ဗျာ။ Dendi ဆိုလည်း နေရာတွေအများကြီး ရောက်ဖူးပြီး လည်ပတ်ဖို့ကျတော့ အချိန်မရဖြစ်နေခဲ့မှာပေါ့နော်။
Answer: ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်မှန်ကန်တဲ့အချက်ပါ။
Question: Minor ပွဲ မတိုင်မီ တစ်ရက်က nerf တွေချည်းပဲ ပါတဲ့ 7.23f ကို Valve က ထုတ်ခဲ့တယ်နော်။ အဲဒီထဲမှာ meta ထဲက တစ်ချို့အရေးကြီး hero တွေကိုမှ IceFrog က ရွေး nerf လိုက်တာ တွေ့ရတယ်။ Doom, Puck နဲ့ Viper တို့ကို nerf လိုက်တာက Bukovel Minor ပွဲအပေါ် ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာမယ်လို့ မြင်လား။
Answer: အသေအချာပါပဲ။ ဒီ nerf တွေဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် လောလောဆယ် Doom နဲ့ Puck ဟာ pick rate အမြင့်ဆုံး hero တွေထဲမှာ ပါတယ်။ ရန်သူအသင်းရဲ့ draft ထဲမှာ Doom ပါလာဖို့ များသလို Doom လာရင်လည်း သူ့ကို မနိုင်တဲ့ hero တွေ pick လို့ မဖြစ်ဘူး။ ဒီတော့ အတော်များများက ရန်သူ Doom လာရင် counter လို့ ရမယ့် hero တွေ ရွေးပြီး လေ့ကျင့်ထားကြမယ်။
နည်းဗျူဟာ ကြိုစဉ်းစားထားကြတဲ့အထဲမှာလည်း အဲဒီ counter hero တွေ ပါနေမှာပဲ။ Puck လည်း အတူတူပါပဲ။ ဒီတော့ Doom တို့ Puck တို့ကို nerf လိုက်ရင် draft တွေပါ အကုန်ပြောင်းကုန်မယ်။ ကြိုမစဉ်းစားထားသလို ကြိုလည်း မလေ့ကျင့်ထားတဲ့ hero တွေ pick ပြီး ကစားတဲ့ အသင်းတွေ ရှိလာမယ်။ Patch တစ်ခုမှာ ပါလာတဲ့ အသေးစား nerf လေး ၅ ခုက meta တစ်ခုလုံးကို ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့အသင်းတွေက လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြမယ်။ တစ်ချို့ဆိုလည်း patch ပြောင်းပြီး ခဏလေးအတွင်းမှာတင် အသစ်စဉ်းစားမိတာတွေ ရှိလာမယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အရင်လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ အကောင်းဆုံးကစားနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ ပွဲရဲ့ အစပိုင်းရက်တွေမှာတော့ အသင်းတွေရဲ့ ကျပန်းကစားကွက်တွေနဲ့ ပရမ်းပတာဖြစ်နေတာတွေ မြင်ကြရမှာပါပဲ။ ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံပိုရှိထားတဲ့အသင်းတွေက အသာစီးရနေမယ်။ အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိပဲ ကြိုးစားမှုကိုပဲ အခြေခံထားတဲ့ အသင်းတွေအတွက်ကတော့ ဒီ patch အသစ်ထွက်လာတာ ကံဆိုးတာပါပဲ။ သူတို့ဆို ရက်ပေါင်းများစွာ မနားမနေ စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြရမှာပါ။
Question: ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်လည်း ထပ်ဆုံချင်ပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကိုရော ဘာများ ပြောချင်သေးလဲ မသိဘူး။
Answer: ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အားပေးပြီး စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ပရိသတ်အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။